Tag: email ku habboonaynta | Martech Zone
Tag: email hagaajinta
Sabti, Febraayo 13, 2021 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah doodaha aan usbuuc walba la yeesho macaamiisha ayaa ah tan sii kordheysa ee jahwareerka leh ee dhismaha iyo joogtaynta barnaamijka suuqgeynta iimaylka guuleysta. Si fudud u dhig, sida liiska suuqgeynta emailkaagu u korayo, sidaas oo kale madax-xanuunnadaada la isugeyn karo. Waxay u muuqataa in bixiyeyaasha adeegga internetka ay ka tageen rajo kasta oo ah abaalmarinta hababka ugu fiican oo kaliya ay leeyihiin algorithms carrab la 'oo sii wadaya inay ciqaabaan kuwa soo diraya wanaagsan. Xaaladda marka la eego, mid ka mid ah asxaabteyda warshadaha ayaa helay Yahoo! xayiraya 100%
Khamiis, Juun 18, 2015 Axad, Juun 21, 2015 Douglas Karr
Sannadkan IRCE-da Chicago, waxaan ku wareystay David Brussin, aasaasihii Monetate, waxayna ahayd wada hadal iftiiminaya isbeddelka rajada macaamiisha iyo waayo-aragnimada ay ka rajeynayaan tafaariiqda intarneedka iyo dibaddaba. Dacwadda shaqsiyeynta ayaa sii xoogeysaneysa waxaana laga yaabaa inay hadda gaartey heer dhibic. Warbixinta 'Monetate's' ee Ecommerce Quarterly-kii dhawaa waxay muujineysaa in heerarka boodhku ay kor u kacayaan, celceliska qiimaha dalabku hoos ayuu udhacayaa isla markaana heerarka beddelka ayaa sii socda inay hoos u dhacaan.
14 Horumar ee Saameyn ku yeelan kara Suuqgeynta Emailkaaga ee 2015
Isniin, Maarso 2, 2015 Douglas Karr
Marka laga reebo moodeellada jawaabta ee jawaabta leh, tikniyoolajiyadda ka dambeysa emaylka wax badan iskama beddelin tobankii sano ee la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah dib u soo celinta ugu xoogan ee maalgashiga suuq geynta, suuqleyda ayaa arkaya soo laabasho weyn markii ay si buuxda uga faa'iideysanayaan tiknoolajiyada tallaabada ay ku dirayaan farriinta ay qaybinayaan. Halkan waxaa ah 14 Horusocodyada Teknolojiyada Taasi oo Saameyn Ku Leh Suuqgeynta Emailka Shakhsiyeynta waqtiga-dhabta ah iyadoo lagu saleynayo xogta marinka marinka Ilaha xogta weyn waxay ku quudin doonaan waxyaabaha saadaalinta iyo macnaha guud ee emaylka. Fariin isku dhafan
Kuma helayo wax badan oo ka fudud tan xog-ururintan ka socota ContentLEAD. Rajada waxaa ku soo qulqulaya emaylka sababtoo ah qiimaha hooseeya ee macdanta 'lead' iyo heerka beddelka sare. Laakiin taasi waxay muujineysaa dhibaato weyn huge e-maylkaaga ayaa ku lumay sanduuqaaga boqolaal ama kumanaan fariimo kale oo suuqgeyn riix ah. Maxaad sameyn kartaa si aad ugala soocdo xiriirada emailkaaga dadka badan? Halkan waxaa ah 5 walxood oo ku jira anatomy ee fariin email ah oo ay weheliso saameynta
Xeeladaha Muhiimka u ah Suuqgeynta Emailka
Suuqgeynta Email-ku waxay sii waddaa inay noqoto habka ugu hufan ee dib loogu xiriiri karo, loo hayn karo loona soo jiidan karo macaamiisha. In kasta oo ay jiraan caqabado ku soo dhacaya sanduuqa, weli waxaa jira xeelado soo saara natiijooyin kooxaha suuqgeynta emailka wax soo saar leh. Tirakoobkii Suuqgeynta Suuqgeynta Emailka ee Adestra / Econsultancy ee 2014 ayaa lagu qiimeeyay in ka badan 1,100 suuq galiyeyaal dijitaal ah waxaana lagu ogaaday sifooyinka muhiimka u ah abuuritaanka koox riyadeed suuq geyn email ah. Waxaa jira tirooyin badan oo waaweyn oo taageeraya istiraatiijiyadaha suuqgeynta iimaylkaaga ee ku saleysan macluumaadka: